June 21, 2021 by Justin26
The Apple Watch mudziyo wakaoma asi unopa zvakawanda ku Apple iPhone vashandisi vanofara uye vane shungu yekuongorora zvese zvimiro zvaro.
Kune chikamu chikuru, iwe unofanirwa kuve unokwanisa kugadzirisa mabhesiki eApple Watch yako nyowani, asi Apple yaisanganisira yakawanda yakavanzika matombo ekukubvumidza iwe kuti uwane zvakanyanya kubva mairi kupfuura iwe zvaunofunga kuti zvinogoneka.
Unovhura sei Power Reserve? Unojekesa sei ako ese mameseji kamwechete? Iwe unotora sei skrini paApple Watch? Heano matipi edu uye matipi azere mapfupi, sarudzo nekukurumidza uye zvimwe zvakawanda, zvese zvakamirira kuwanikwa uye kushandiswa kukubatsira iwe kuva Apple Watch simba mushandisi.
Apple Tarisa General matipi uye manomano
Maitiro ekuti mbeveve kana kunyararidza Apple Watch
Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi Apple wako Watch uye vawane musi bhero kuvake. Izvi zvinoshandura yako Apple Watch kuita yakanyarara mode.
Maitiro ekuparadza Apple Watch
Vhura iyo Apple Watch app ye iPhone> Musoro kune Yangu Yekutarisa tebhu> Tapira paWatch Watches dzese kumusoro kuruboshwe> Tapira pane yako Apple Watch> Tinya pane chiratidzo chemashoko padhuze neApple Watch yako> Sarudza Unpair Apple Watch.
Maitiro ekubatanidza uye kumisikidza iyo Apple Watch ne iPhone
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tevedza rairo. Izvo zvakanaka uye zvakapusa, tinovimbisa. Iwe unozotungamirwa kuburikidza nezvose, kusanganisira kuwedzera makadhi e Apple Pay. Apple Watch inoshanda chete ne iPhone saka kana uri mushandisi weApple, haugone kubatanidza Apple Watch kune chako chishandiso.
Maitiro ekumisikidza uye maneja yeApple Watch yemwana
Kuti ugadzire Apple Watch yemwana wako, isa yako iPhone padhuze newachi. Iwe unozobva wabaya kuenderera Ende uye sarudza Gadzirira Nhengo Yemhuri.
Maitiro ekugadzirisa fekitori iyo Apple Watch
Vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch> General> Bhura pasi kuti 'Reset'> Bvisa Zvese Zvemukati uye Zvirongwa.
Maitiro ekuvandudza Apple Watch
Kuti utarise kuti urikumhanyisa software yazvino yeOSOSOS, vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch> General> Software Gadziriso. Kana paine software yekuvandudza, ita shuwa kuti yako Apple Watch yakabatana neWi-Fi uye pane yayo charger uye tinya iyo 'Dhawunirodha uye Isa' bhatani.
Ungachinja sei kana kubvisa bhendi reApple Watch
Bvisa Apple Watch yako woidzosera. Iwe uchaona mabhatani maviri kumusoro uye pasi peiyo reti yemoyo sensor pazasi peiyo kesi. Pushira bhatani rega rega mukati uye tsvedza tambo yakasarudzika kunze. Iwe unogona kusevha imwe tambo mukati uye ichatinya munzvimbo.
Maitiro ekudzima Apple Watch
Dhinda uye bata bhatani repadivi pazasi peDhijitari Crown uye wozotsvedza iyo Simba Off sarudzo kubva kuruboshwe kuenda kurudyi pane menyu. Iwe unogona zvakare kusarudza kuratidza yako Medical ID (kana iwe wakamisa iyo) kana kufona SOS kufona.
Maitiro ekuvhura Apple Watch
Dhinda uye bata bhatani repadivi pazasi peDhijitari Crown kuti udzorere yako Apple Watch kumashure.
Maitiro ekuvhura Inogara Yakaoneswa paChinyorwa 5/6
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi pasi kuti Uratidze & Kupenya> Gara Uchiripo> Toggle on or off.
Viga zvinetswa zvinotapira pane Zvinogara zvichiratidzwa paChikamu 5/6
Kana iwe uchida data senge ako akagadzwa akagadzwa, mameseji uye nemoyo kurovera kunogona kuvanzwa kana ruoko rwako rukave pasi, kunyangwe kana iyo inogara ichiratidzwa iripo.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi kuti Uratidze & Kupenya> Rambai Riripo> Toggle on or off Hide Sensitive Complications.
Maitiro ekuvhura Power Reserve mode pane Apple Watch
Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi kwako Apple Watch wachi kumeso uye vawane bhatiri muzana. Iwe unogona kusvaira kuruboshwe kurudyi pane iyo Power Reserve tebhu kuti ubatidze iyo.
Maitiro ekudzima Power Reserve mode pane Apple Watch
Dhinda uye bata bhatani repazasi pazasi peDhijitari Crown kusvikira iyo Apple logo iratidzike kudzima Power Reserve.
Maitiro ekutora skrini paApple Watch
Kuti ubvise pikicha yechinhu chiri paApple Watch skrini, tinya zvese zviri zviviri Dhijitari Crown uye bhatani rerutivi panguva imwe chete.
Mufananidzo wacho unozochengetwa otomatiki kune ako Mapikicha album pane yako iPhone. Iwe unozofanirwa kuve nechokwadi 'Kugonesa Screenshots' iripo zvakadaro. Kuti uite izvi, tungamira kuApple Watch app ye iPhone> General> Bhura pasi kuti Enable Screenshot uye uone kuti yakashandurwa.
Maitiro ekuomesa reset yako Apple Watch
Dhinda iyo Crown Dhijitari uye yechipiri bhatani kwemasekonzi gumi kusvika Apple logo yaonekazve.
Maitiro ekuita iyo skrini kutema nguva yakareba
Enda kuWatch app pane yako iPhone> Rova iyo Yangu yekutarisa tebhu uyezve 'General'. Bhura pasi pasi kuti 'Wake Screen' uye woisa iyo 'On Tap' marongero ku "Wake for 70 seconds".
Maitiro ekudzima Bedside Mode
Izvo zvinokwanisika kuita yako Apple Watch shanduko kuNightstand modhi kana yakabatana nechaja parutivi rwayo. Izvi zvicharatidza nguva, seyambiro yewachi inogona semuenzaniso.
Kana iwe uchida kudzima ichi chimiro, enda kuWatch app pane yako iPhone> Yangu Yekutarisa Tab> General> Yepadhuze yeMubhedha. Iwe unogona zvakare kugonesa uye kudzima yeMubhedha Mode kubva kuZvekushandisa app paWatch.
Maitiro ekukurumidza kuenda kune yekupedzisira app paApple Watch
Tinya kaviri paDhijitari Crown pane yako Apple Watch kuti uende kune yekupedzisira app iwe yawaishandisa.
Maitiro ekuwana maapps achangobva kushandiswa
Imwe bhatani bhatani repadivi pasi peDhijitari Crown uye iwe uchaona ese maapplication awachangobva kuvhura.
Maitiro ekuwana Siri paApple Watch
Pamwe uti "Hei Siri" kana kuti pfuurira kwenguva refu paDhijitari Crown kuti uite Siri paApple Watch.
Mashandisiro eSiri paApple Watch kushandura
Simudza ruoko rwako, wobva wati "Unoti sei 'Uri sei muChinese'". Siri anozogona kududzira zvakananga kubva kuWatch yako mumitauro gumi.
Maitiro ekuti mbeveve irwo runouya runhare
Kuti udzore runhare rwunouya, chingovhara Apple Watch neruoko.
Maitiro ekudzoka kuzotarisa kumeso
Usatombo kunetseka nezve kudzvanya iyo Dhijitari Korona kuti urambe uchidzokera usati wapedzisira wadzokera kumeso mukuru wekutarisa. Pane kudaro, ingoisa ruoko rwako pamusoro peako Apple Watch kumeso uye ichaenda nhema. Tinya pachiratidziro uye unozodzoserwa kuchiso chekutarisa ipapo ipapo.
Maitiro ekuvhura yako Apple Watch neako iPhone
Iwe unogona kuseta Apple Watch kuti izarure otomatiki paunenge uchipfeka uye iwe uchivhura yako iPhone.
Enda kuApple Watch app pa iPhone> Yangu Yekutarisa tebhu> Passcode> Kiinura ne iPhone.
Maitiro ekuvhura yako iPhone neApple Watch paunenge wakapfeka mask
Unogona kuimisa kuitira kuti yako Apple Watch ivhure yako iPhone riinhi Face ID inoona kumeso kumeso, sekureba sekunge iwe uchimhanya iOS 14.5 kana gare gare uye watchOS 7.4 uye gare gare. Wako yako inoda kuve pachiuno chako, padyo neiyo iPhone yako, yakavhurwa uye inochengetedzwa nepasipoti.
Vhura Zvirongwa pane iPhone> Chiso ID & Passcode> Nyora mupasipoti yako> Toggle pa '[Zita] Apple Tarisa' pasi pe "Vhura neApple Watch" chikamu.
Nzira yekuwana yako yakarasika iPhone uchishandisa yako Apple Watch
Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi kwako Apple Watch wachi chiso. Tinya pane chiratidzo che iPhone uye kana yako iPhone iriko, inotumira inonzwika ping kuti ikubatsire kuiwana.
Nzira yekuwana yako Apple Watch uchishandisa yako iPhone
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tinya pane Yangu Yekutarisa tebhu> Tapira paWatch Watches> Dzvanya paWatch yako> Tinya pane chiratidzo chiratidzo pane kurudyi kwerako Ruzivo ruzivo> Tinya pane Tsvaga Yangu Apple Tarisa sarudzo. Izvi zvichaburitsa iyo Tsvaga App yangu, iyo iwe yaunogona zvakare kuvhura zvakasununguka.
Iwe unogona ipapo kusarudza Kutamba Ruzha, Bvisa yako Apple Watch kana Maka Seakarasika.
Maitiro ekuvhura iyo Ndege modhi pane yako Apple Watch
Unogona kubatanidza wachi yako uye yako iPhone kuti upinde muAirplane modhi pamwe chete, kana iwe unogona kutenderedza Mamiriro eNdege pamaoko kubva kuApple Watch yako.
Ita shuwa kuti Ndege Mode Mirror iPhone ficha yakavhurwa muApple Watch app. Kubva kuApple Watch app pa iPhone, enda kune Yangu Yekutarisa Tab> General> Ndege Mode> Toggle pa Mirror iPhone.
Neimwe nzira, swipe kumusoro kubva pasi pechiso chako cheWatch uye tinya ndege kana kuvhara.
Maitiro ekushandura Usakanganisa kana kudzima pane yako Apple Watch
Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi peApple Wako wachi kumeso uye rova ​​mwedzi. Izvi zvichachinja usavhiringidza kuvhura kana kudzima. Iwe unogona kusarudza pakati paOn, On kwe1 Hora, On Kusvikira Aya Manheru kana On Kusvikira Ndasiya.
Maitiro ekudzorerazve kana kudzima marongero ekukurumidza pane yako Apple Watch
Kana iwe uchida kuti chiratidzo chemwenje chiwanikwe nyore, kana modhi yendege, semuenzaniso, unogona kugadzirisa patsva Zvirongwa zvepamusoro paApple Watch yako kuti ugone kuwana zvaunoshandisa zvakanyanya, nekukurumidza.
Rova zvakasimba kumusoro kubva pasi kwako Apple Watch wachi chiso uye Mupumburu kusvikira pasi. Tinya 'Hora'. Mifananidzo yacho ichasvetuka kuitira kuti ugone kuiendesa munzvimbo inokodzera zvaunoda. Ita shuwa kuti warova 'Done' pazasi mushure.
Ungachinja sei Apple Watch yako kuruboshwe-ruoko
Iwe unogona kuchinja maitiro eApple Watch nekumisikidza kuti uchave uchiishandisa kuruboshwe here kana kurudyi ruoko. Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tinya pane Yangu Yekutarisa tebhu> General> Tarisa Mafambiro> Chinja kubva kuruboshwe kurudyi kana zvinopesana. Iwe unogona zvakare kusarudza iro divi reDhijitari Korona.
Unogona kushandura huwandu hwekuwanika maficha paApple Watch, senge maitiro ainoita kune yako yekuisa. Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tinya pane Yangu Yekutarisa tebhu> Kuwanikwa. Iwe unozokwanisa kumhanya paBold Chinyorwa uye Zoom mune izvi zvigadziriso, semuenzaniso.
Maitiro ekugonesa Handoff kune yako Apple Watch
Kana iwe uri kuita chimwe chinhu pane yako Apple Watch iyo iwe yauchazoda kuenderera uchiita pane yako iPhone, iwe unogona kugonesa Apple's Handoff ficha kuti iwe ugone kuenderera sezvawakanga uri.
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Sarudza iyo Yangu Yekutarisa Tab> General> Toggle pa Enable Handoff.
Ungachinja sei maratidziro eapplication paApple Watch
Vhura iyo Apple Watch app pane yako iPhone> Tapira pane Yangu Yekutarisa tebhu> App Kuona> Sarudza pakati peGid Wona uye Rondedzero Kuona.
MuGrid View, iwe unogona zvakare kubata paRongedzero. Iwe unozobva wakwanisa kutanga kufambisa madenderedzwa kutenderedza kuti uwane zvaunofarira.
Maitiro ekudzima app kubva kuApple Watch
Enda kuchiratidziro cheapp paWatch yako nekudzvanya iyo Dhijitari Crown> Yakareba kudzvanya pachiratidziro kusvikira ma icon atanga kusvetuka. Chero maapplication ane 'x' mukona yepamusoro yekurudyi anogona kubviswa. Iwe unogona zvakare kufambisa maapplication kutenderedza nenzira imwecheteyo yaunoita pane yako iPhone uchishandisa ichi chidimbu. Izvi zvinongoshanda chete kana iwe uine dhizaini yeapp yakamisikidzwa kuGrid View.
Maitiro ekuwedzera maapplication kuApple Watch
Zviri nyore kuwedzera maapplication kuApple Watch kupfuura zvayaimboita seApple Watch ine App Store yayo WatchOS 6 uye gare gare. Dhinda iyo Dhijitari Crown kuti ikuendese iwe kuApple skrini uye wozotarisa chiratidzo cheApp Store.
Iwe unozobva wakwanisa kutsvaga kana kupururudza kuburikidza akasiyana siyana akakurudzirwa maapplication eApple Watch. Tinya pane Anwendung iwe yaunoda kurodha pasi uye pinda 'Tora' kuiwedzera kune yako Apple Watch.
Iwe unogona zvakare kuwana uye kurodha matsva maapplication eApple yako Watch pane yako iPhone. Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tinya pane Tsvaga tebhu pazasi kurudyi> Dzvanya Ongorora Tarisa Zvirongwa> Tsvaga app yaunoda uye tinya 'Get'.
Maitiro ekubatanidza mahedhifoni eBluetooth kune Apple Watch
PaApple Watch, vhura iyo Settings app uyezve neBluetooth. Unogona kubatanidza mahedhifoni akananga kuApple Watch yako kubva pano.
Wedzera kudengenyeka nePrincent Haptic
Dzimwe nguva haptic (buzz) kubva kuzivisa haina kukwana kukuzivisa iwe, kunyanya kana iwe uri kupfeka yako Apple Watch tambo zvakasununguka.
Kuti ubatsire kurwisa izvo, iwe unogona kubatidza chimwe chinonzi 'Hominic Haptic' iyo kana ichivhurwa, Apple Watch ichatamba yakakurumbira haptic kufanotangisa kuzivisa zvimwe zvakajairwa. Kuti ubvise izvi, enda kune iyo Zvirongwa app paApple Watch> Mheremhere & Haptics
Maitiro ekuvhura kadhi kadhi kadhi katanhatu
Sekusavimbika, iyo Apple Watch inouya neine-manhamba mapasipoti.
Kuti uite izvozvo, enda kuApple Watch app ye iPhone> Passcode> De-toggle Simple Passcode> Type mune yako nyowani matanhatu-kodhi kodhi.
Maitiro ekubatanidza yako Apple Watch kune Wi-Fi
Munguva yekumisikidza, iwe unozofanirwa kubatanidza yako Apple Watch kuWi-Fi asi kana iwe ukachinja maWi-Fi masisitimu kana iwe uchida kubatana kune imwe netiweki, yakanaka uye yakapusa.
Vhura iyo App yezvirongwa pane yako Apple Watch> Bhura pasi pasi kuWi-Fi> Sarudza network yaunoda kujoina> Pinda password.
Maitiro ekuvhura Mac yako neako Apple Watch
Kana iwe uine Mac uye Apple Watch, unogona kuiisa kuti yako Apple Watch ivhure MacBook yako pasina iwe kuti unyore pasiwedhi yako.
Vhura iyo Sarudzo dzeSystem pane yako Mac> Chengetedzo & Yakavanzika> Ratidza kuti 'Shandisa yako Apple Watch kuvhura maapplication uye Mac' bhokisi> Nyora mune yako Mac password kuti ugone.
Mashandisiro aungaita Apple Bhadhara paApple Watch
Paunenge iwe uchinge wamisikidza makadhi ako paApple Watch, ingo peta-bhatani bhatani repadivi pasi peDhijitari Crown kuvhura Apple Pay. Unogona kutsvedza pakati pemakadhi awakamisa uye wobva wangobata yako yekutarisa padyo nenzvimbo yekubhadhara.
Maitiro ekuwedzera kadhi yekubhadhara kune yako Apple Watch
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tap paWallet & Apple Bhadhara> Wedzera Kadhi. Iwe unofanirwa kutevera matanho ekuwedzera yako yekubhadhara kadhi.
Maitiro ekusarudza yako default kubhadhara kadhi paApple Watch
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tinya paWallet & Apple Bhadhara> Default Kadhi> Sarudza iyo kadhi iwe yaunoda kuve nekiyi kadhi. Usatombo kunetseka, iwe unogona kuchinja pakati pemakadhi zviri nyore saka hazvina basa zvakanyanya.
Gadza Express Kadhi Kadhi
Kana iwe ukaisa Express Kadhi Kadhi, haufanire kupeta kaviri bhatani repadivi kuvhura Apple Pay pane yako Apple Watch kana uchifamba nezvifambiso zveveruzhinji. Kamwe iyo Express Yekufamba Kadhi iri setup, iwe unozogona kungo bata wachi yako uchipesana neruzhinji rwekutakura yekufambisa chiteshi kuti ubhadharire rwendo rwako.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tap paWallet & Apple Pay> Sarudza Express Kadhi Kadhi> Sarudza iyo kadhi iwe yaunoda kushanda otomatiki kana uchifamba pasina iwe uchida zvakapetwa kaviri padivi bhatani.
Mashandisiro aungaita yako Apple Watch kusimbisa kubhadhara paMac
Unogona kushandisa Apple Bhadha pane yako Apple Watch kusimbisa kubhadhara pane iri padyo Mac. Kuti uite izvi, vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tinya paWallet & Apple Kubhadhara> Tendeuka pane Bvumidza Kubhadhara paMac.
Nzira yekuwana sei Chiremba ID paApple Watch
Push uye ubatise bhatani repadivi padhuze neDhijitari Korona paApple Tarisa uye slide iyo Medical ID sarudzo kuti uone Medical ID. Iwe unozofanirwa kuseta Medical yako ID kumusoro pane yako iPhone zvisati zvaitika.
Maitiro ekuisa ruoko rwekugeza timer paApple Watch
Apple Watch inogona kuona paunenge uchigeza maoko kana iwe ukaibatidza, uye woisa 20-yechipiri timer kuti iwe ugeze iwo kwenguva yakakwana.
Vhura Zvirongwa pane yako Apple Watch> Bhura pasi pasi kuWashwashing> Toggle iyo on.
Maitiro ekuisa ruzha rwako chikumbaridzo paApple Watch
Iwe unogona kusarudza kuziviswa neako Apple Watch kana iwe uri mune nharaunda umo mazinga eruzha anogona kunge achikanganisa kunzwa kwako.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Ruzha> Noise Threshold> Sarudza chikumbaridzo chako.
Maitiro ekutarisa ruzha mazinga pane yako Apple Watch
Vhura iyo Ruzha app paApple Watch uye iwe uchaona kukwanisa kuona izvo decibel nharaunda iwe urimo.
Ungatanga sei kurekodha izwi kubva kuApple Watch yako
Vhura iyo Voice Memo app pane yako Apple Watch uye tinya iro hombe dzvuku bhatani. Izvi zvinotanga kurekodha izwi kuchazoponeswa kune yako iPhone, iPad uye Mac.
Apple Tarisa Meseji matipi uye manomano
Maitiro ekuverenga meseji paApple Watch
Paunowana meseji, simudza ruoko rwako kuti uone kuti meseji yako iri kubva kunaani uye uverenge izere meseji. Dzikisa ruoko rwako kuti urubvise.
Pindura nesetet meseji paApple Watch
Kana meseji ikauya paApple Watch yako, pfuurira pasi pasi uye unogona kutumira meseji yakatarwa mukupindura.
Iwe unogona kusarudza kuraira meseji yako kuti ishandurwe mazwi kuburikidza neSiri kana kutumira sefaira rekuteerera mukati mechinyorwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kushandisa munwe wako kunyora uye inozoishandura kuita zvinyorwa.
Pindura neEmoji, Animoji kana Memoji
Apple zvakare inoita kuti iwe upindure neakawanda akasiyana emoji akasarudzika kuApple Watch, pamwe neyakajairwa emoji, Animoji uye Memoji stickers. Kuti uone kupfuura emoji yako ichangoburwa peta pasi nemunwe wako kana Dhijitari Crown uye iwe unowana mamwe emoji pamwe naMemoji naAnimoji.
Maitiro ekutumira meseji nyowani paApple Watch
Vhura iyo Messages app pane yako Apple Watch uye dhonza pasi kubva kumusoro. Iwe uchaona 'Mutsva Mharidzo' kumusoro, tinya pane izvo kunyora mutsva meseji.
Mirror yako iPhone yeMeseji paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Meseji> Ratidza Kanda Mirror yangu iPhone. Yako Apple Watch ikozvino inokuzivisa iwe nenzira imwecheteyo yako iPhone yakagadzirirwa mameseji matsva.
Dzokorora chete chenjedzo kamwe chete
Kana iwe usiri kuda kuti yako Apple Watch iratidzike nguva dzese, unogona kuiisa kuitira kuti wachi yako ingokunyevera nezveyese meseji meseji kamwe pane kaviri. Enda kuApple Watch app ye iPhone> Meseji> Sarudza Tsika. Neimwe nzira iwe unogona kuti wachi irikuyeuchidze nezve imwechete meseji kusvika kagumi.
Bvisa ruzha rwemashoko ekuzivisa paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Meseji> Sarudza Tsika> Toggle Ruzha rudzime.
Tumira Verenga maRisiti kubva kuApple Watch
Iwe unogona kuseta iyo Apple Watch kuti iitumire otomatiki kuverenga maretiiti kana iwe waverenga meseji. Enda kuApple Watch App ye iPhone> Meseji> Sarudza Tsika> Chinja Tumira Verenga maRisiti mukati kana kudzima zvichienderana nezvaunoda.
Kuchinja Mhinduro Dzakasarudzika paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Meseji> Default Mhinduro. Unogona kushandura mhinduro dzese dzaunotumira apo Apple Watch isiri kuyedza kufungidzira zvekutaura nekutepa Hora kumusoro kurudyi. Kana iwe unogona kudzima kana Kupindura Smart mhinduro.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuwedzera mhinduro iyo iwe yaungade kutumira kazhinji kana iwe ukapurikira kusvika pasi. Kusvetera kurudyi kuruboshwe pane yakasarudzika mhinduro inokutendera iwe kuidzima.
Apple Tarisa Mail matipi uye manomano
Kudzima e kubva kuApple Watch yako
Iwe unogona kukurumidza kudzima email kubva kuinbox yako runyorwa nekusvetuka kurudyi kuenda kuruboshwe pane meseji pane yako Apple Tarisa uye nekukanda iyo tsvuku icon nebhinhi.
Mira email paApple Watch
Iwe unogona kumaka maemail ako nekutsvaira kurudyi kuenda kuruboshwe pane meseji paApple Watch uye nekukanda mureza icon.
Kumaka email seisina kuverenga kubva kuApple Watch yako
Unogona kutara email seisina kuverengwa kubva kuApple Watch yako nekutsvaira kuruboshwe kurudyi pane meseji iri mubhokisi rako rekunyora kana kupuruzira pasi kusvika kumagumo eemail kana iwe urimo uye uchirovera paMako seisina Kuverengwa.
Mirror yako iPhone yeMeyili paApple Tarisa
Endai kuApple Tarisa app ye iPhone> Tsamba> Tiki Mirror yangu iPhone. Yako Apple Watch ikozvino inokuzivisa iwe nenzira imwecheteyo iyo iPhone yako painomiswa paunowana maemail matsva.
Gadzirisa zvaunotumwa neemail paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Tsamba> Tsika. Pano unogona kusarudza kuti rimwe nerimwe remakero ako emaemail akasiyana anobatwa sei uye kana uchida ziviso zvachose.
Maemail chete kubva kumaVIP pane Apple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Tsamba> Tsika> Tick VIPs. Iye zvino iwe unongowana chete chenjedzo pane yako Apple Watch kana maVIP ako achikutumira email.
Chinja saizi yekutarisa mameseji paApple Watch
Iwe haugone kuve neipi, imwe, kana maviri mitsara yekutarisa yako emaimeri mameseji paApple Watch. Kuti usarudze iyo yako iwe enda kuApple Watch app ye iPhone> Tsamba> Meso Ekutarisa.
Ungachinja sei email yako siginecha paApple Watch
Nokusingaperi, chero email yaunotumira kubva kuApple Watch yako ichati "Kutumwa kubva kuApple Watch yangu". Kuti uchinje siginecha yako, vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Sarudza Mail> Tsika> Siginecha> Nyora zvaunoda kuti siginecha yako nyowani ive.
Usadzime maemail nekukanganisa paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Tsamba> Tsika. Bhura pasi uye shandura pane 'Bvunza Usati Wadzima'.
Maitiro ekupindura maemail pane Apple Watch
Unogona kupindura maemail, kumaka iwo, kumaka iwo seasina kuverenga kana kuadzima paApple Watch. Kuti uite kudaro, pfuurira pasi pasi peiyo email yauri kuverenga uye wakasarudza kubva pane zvingasarudzwa.
Kusarudza tambo nyowani yeApple Watch
Apple Tarisa Zvekuita matipi uye manomano
Chinja zvinangwa zvako paApple Watch
Vhura iyo Anwendung app paApple Watch uye pfugama pasi kusvika pasi pezvikamu zvako kuti uchinje chinangwa chako chezuva nezuva, rovedza chinangwa uye mira chinangwa.
Ona mamwe data rebasa paApple Watch
Rova zvakasimba kumusoro kubva pamhete nhete pfupiso paApple Watch maonero kuti uone rumwe ruzivo, kusanganisira anoshanda macalorie, nhanho, chinhambwe uye ndege dzakakwira.
Bvisa zviyeuchidzo zveStand paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Zvekuita> Toggle Mira Zviyeuchidzo zvadzimwa. Tevedzera iwo iwo mirairo kuti udzore Stand Zviyeuchidzo kumashure.
Dzima zviitiko zvekuvandudza zviitiko paApple Watch
Kana iwe usiri kukakavara nezvekuwana zvigadziriso muswere wese nezve mashandiro auri kuita ipapo unogona kuchinja kana iyo Apple Watch ikakuzivisa nezvazvo.
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Zvekuita> Mazuva ese Coaching.
Bvisa zviyeuchidzo zveBasa paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Zvekuita> Bvisa zvese zviyeuchidzo zvausingade.
Dzima chiitiko chekutevera zvachose paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Zvakavanzika. Pane zvingasarudzwa zviviri: Kukwikwidza Kutsvaga uye Moyo Rate. Iwe unogona kuvhura kana kuvhara kana kudzima, kana zvese zviri zviviri kumisa iyo yekurovera yemoyo sensor kuverenga macalorie ako akapiswa uye wachi ichishandisa kufamba kwemuviri wako kuona yako nhanho kuverenga uye kugwinya kwehutano.
Apple Tarisa Workout matipi uye manomano
Maitiro ekumbomira kana kupedzisa kurovedza muviri nekukurumidza paApple Watch
Rova zvakasimba kuruboshwe kurudyi panguva yekurovedza muviri pane yako Apple Watch kuti upedze kana kumbomira kurovedza muviri. Unogona kusarudza kusarudza kuirasa kana kuirasa.
Chinja metric inoratidzwa panguva yekurovedza muviri paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Workout> Workout View. Iwe unogona kuseta zvaunofarira zveakasiyana ekudzidzira.
Maitiro ekugonesa Simba kuchengetedza mode muWorkout paApple Watch
Kana iwe uchida kuchengetedza simba panguva yekurovedza muviri, unogona kudzima yekutarisa kwemoyo. Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Workout> Chinja Simba Saving Mode sarudzo pa.
Wedzera zvikamu kana uri panze kumhanya paApple Watch
Izvo zvinokwanisika kuwedzera chidimbu kana uri kunze kwekumhanya neApple Watch nekungobaya kaviri kuratidza. Chikamu chinoratidza nguva, chinhambwe uye avhareji kumhanya.
Batidza Kumhanya Auto Kumbomira pane Apple Tarisa
Iwe unogona kuchinja pane imwe nzvimbo inonzi Running Auto Pause paApple Watch iyo ichamira kumbomhanya kushanda kana iwe ukamira kufamba uye wozvitangazve paunotanga zvakare.
Enda kune Apple Tarisa app ye iPhone> Workout> Toggle paKumhanya Auto Kumbomira.
Sarudza runyorwa rwekutamba kuti utambe wega paunotanga Workout paApple Watch
Unogona kusarudza playlist kuti utange kutamba otomatiki pese paunotanga Workout paApple Watch, kunyange isingatambe kana iwe uchinge uchiteerera kumumhanzi kana imwe odhiyo.
Kuti uvhure chinhu ichi, tungamira kuApple Watch app ye iPhone> Workout> Bhura pasi pasi kuWorkout Playlist> Sarudza yako Playlist. Iwe unofanirwa kutora pasi runyorwa kubva kuApple Music.
Apple Tarisa hutano uye ekurara matipi uye manomano
Maitiro Ekutevera kurara neApple Watch
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi pasi kurara> Toggle pane Track Kurara neApple Watch.
Maitiro ekudzima zuva uye nguva paApple Tarisa paunorara
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi pasi kurara> Toggle kure Ratidza Nguva.
Maitiro ekuvhura zviyeuchidzo zvekuchaja
Iwe unogona kuwana chiyeuchidzo kubhadharisa yako Apple Watch pamberi pemhepo yako pasi nguva yekuona kuti ine enogh muto wekutarisa kurara kwako.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi kusvika Kurara> Toggle pane Kubhadharisa Zviyeuchidzo.
Maitiro ekuvhura kana kudzima iyo yekuwachisa timer
Apple Watch inogona kuona paunenge uchigeza maoko uye kutanga 20-yechipiri timer. Kuti uite izvi, vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi pasi kuWashwashing> Toggle pane off Handwashing Timer.
Maitiro ekuvhura Ropa Oxygen zviyero paChikamu 6
Iyo Apple Watch Series 6 ine Ropa Oxygen app kuyera iwo mazinga eokisijeni muropa rako uye kutora pane-kudiwa kuverenga.
Kuti uvhure kana kudzima, vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Bhura pasi pasi kune Ropa Oxygen> Toggle on or off Blood Oxygen Measurements.
Apple Tarisa Music matipi uye manomano
Maitiro ekuona albha art paApple Watch
Tinya pamatombo matatu mukona yepazasi yeiyo irikutamba skrini muApple Music app uye pfugama pasi kuti utarise albam.
Maitiro ekuchinjisa playlist kana albubhu paApple Watch
Tinya pikicha yepakati pazasi peNow Playing screen paApple Music app paApple Watch wobva wabaya bhatani rekushusha pane rinotevera skrini.
Svetuka arufabheti mune track kana albhamu zvinyorwa pane Apple Watch
Tsvaga nekukurumidza neDhijitari Crown kusvikira tsamba yaonekwa kana iri muApple Music app paApple Watch. Ichazosvetuka kuburikidza nenziyo dzako kuburikidza nearufabheti.
Simudza vhoriyamu neDhijitari Korona paApple Watch
Paunenge uchiona mimhanzi muApple Music app paApple Watch, shandisa iyo Dhijitari Crown kudzora vhoriyamu kumusoro kana pasi.
Maitiro ekuwedzera mimhanzi kune yako Apple Watch
Iyo Apple Watch inokwanisa kuchengeta nziyo kuti ugone kuteerera pasina yako iPhone padyo - yakanaka kumhanya. Kuti uyananise runyorwa rwekutamba enda kuApple Watch app ye iPhone> Music> Sarudza Wedzera Mimhanzi uye wobva wasarudza runyorwa kana album yaunoda kuyananisa. Nziyo dzinoenderana apo Apple Watch iri pajaja yayo.
Apple Tarisa Karenda matipi uye manomano
Chinja pakati pezita uye zuva rekuona paApple Watch
Vhura iyo yekugadzika app paApple Watch> Bhura pasi pasi kuKarenda> Sarudza kubva Kumusoro Inotevera, Rondedzero uye Zuva rekuona sarudzo.
Tora mirayiridzo kune chiitiko paApple Watch kubva kuKarenda
Kumanikidza Kubata pane yekarenda yekupinda paApple Watch uye sarudza kuwana nzira. Izvi zvinobva zvavhura muMamepu, zvichikutora nhanho nhanho nekudengenyeka pachiuno chako. Iko kupinda kwekarenda kuchazoda kuve nenzvimbo yechiitiko mukati kuti izvi zvishande hazvo.
Tarisa kumeso matipi uye manomano
Ungachinja sei wachi yako yekutarisa paApple Watch
Kumanikidza Kubata pane yakatarisa kumeso pane yako Apple Watch uye wozotsikisa kuruboshwe kana kurudyi kuti uburitse zvimwe.
Maitiro ekugadzirisa ako ekurinda kumeso paApple Watch
Kumanikidza Kubata pane yakatarisa kumeso pane yako Apple Watch uye wobva wadzvanya 'Hora'.
Mupumburu kuruboshwe uye kurudyi kuratidza zvinhu zvakasiyana, senge ruvara, runogona kuchinjwa. Shandisa iyo Dhijitari Korona kupururudza kuburikidza neruvara kana akasiyana Matambudziko.
Tinya pane Kuteedzana kwega kwega kuti uchinje zviri mavari. Haasi ese maficha anowanikwa pane ese mawatch.
Goverana wachi yekutarisa paApple Watch
Kumanikidza Kubata pane yakatarisa kumeso chidzitiro> Rova zvakasimba kune wachi yekutarisa yaunoda kugovana> Tinya pane yekugovana icon padhuze ne 'Hora' pasi pechiso chekutarisa> Tapira paKuwedzera Kutaurirana> Tapira Tumira.
Kubvisa kumeso kwewachi paApple Watch
Rova zvakasimba kumusoro kana uri mukutarisa kumeso kusarudza mamiriro paApple Watch kudzima kumeso. Usazvidya moyo kuti hauna kuibvisa zvachose.
Kuve neanopfuura dhizaini imwe chete yekutarisa kumeso paApple Watch
Mune wachi yekutarisa yakasarudzika mode paApple Watch, peta nzira yese kurudyi uye sarudza nyowani. Shandisa iyo Dhijitari Crown kupurinda kuburikidza zviripo sarudzo.
Kuisa 24-awa nguva paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone uye pfugama pasi menyu uye tapota Clock. Shandura kana iwe uchida kuti wachi yako iratidze 24-awa nguva kana kwete.
Push Alerts kubva ku iPhone yako pane yako Apple Watch
Kana Push Alerts iripo, yako Apple Watch inokuzivisa iwe maTimers nemaAlarms awakaisa pane yako iPhone kuitira kuti ugone kuzoona kana kuvadzinga vari kure.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Clock> Toggle Push Alerts kuvhura kana kudzima.
Bvisa chiratidzo chitsvuku cheApple Watch
Kana chiratidzo cheyekuzivisa chavepo, doti dzvuku richaonekwa kumusoro kwechiso chako cheApple Watch paunenge uine ziviso dzisina kuverenga.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Clock> Batidza kana kudzima iyo Notification Indicator.
Kusarudza yako monogram ruzivo pane yako Apple Watch
Mamwe emaApple Watch anotarisana - kunge Infograph, Ruvara, Meridian neCalifornia - zvinokutendera kuti uratidze monogram yako kumeso.
Iyo Apple Watch app ye iPhone inokutendera iwe kugadzirisa izvo zvekutanga zvinoratidzwa (kusvika ku5).
Kuti uichinje enda kuApple Watch app pa iPhone> Clock> Monogram.
Chinja mazita eGuta kana wedzera zvipfupiso zveairport
Nokusingaperi, Apple inonyora nzvimbo dzedhorobha dzakatenderedza pasirese dzawakachengeta mufoni yako, asi kana ukabatana zvakanyanya neSan Fran kana Seattle kupfuura zvaunoita neLos Angeles saka ungangoda kuchinja zita racho.
Enda kune app pane yako iPhone> Clock> Gwaro zvipfupiso.
Seta iyo nguva pamberi paApple Watch
Vamwe vanhu vanofarira kuti wachi yavo igare yakagadzika maminetsi mashoma nekukurumidza.
Pane yako Apple Watch enda kuZvirongwa> Clock> +0 min. Shandisa iyo Dhijitari Korona kuti uchinje iyo nguva kusvika paawa kumberi mune imwe mineti yekuwedzera.
Kuisa pikicha yekutarisa kumeso paApple Watch
Kuisa imwe pikicha seyadhi yekutarisa paApple Watch, tsvaga pikicha muMifananidzo pane yako iPhone. Iwe unozofanirwa kubaya pane yekugovana icon mune yepazasi kona yekona uye pfugama pasi kuti Gadzira Wakatarisa Chiso.
Apple Tarisa Mafoni matipi uye manomano
Misa yako Apple Watch kurira kana foni yako ichirira
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Runhare> Tsika> Sarudza kuve neWatch show ziviso, kurira, kana kuti zvingaite buzz.
Fonera mumwe munhu kubva kuApple Watch yako
Enda kune iyo Foni Anwendung pane yako Apple Watch uye wozosarudza mumwe munhu kubva kuFavorites, Zvazvino, kana Nhare.
Kuita kufona pane yako Apple Watch
Dhinda iyo Crown Crown kurodha Siri wobva wati "Fona [isa zita]" kuti ufone.
Apple Tarisa Mifananidzo matipi uye manomano
Kufunga kuti ndeapi mafoto ekuratidzira paApple Watch
Unogona kusarudza kuva nemamwe mapikicha kana maalbham akaenderana kune yako Apple Watch kunyangwe iwe usina yako iPhone padyo.
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Mifananidzo> Synced Albums. Iwe unogona ipapo kusarudza kuti ndeapi maalbum aunoda pane yako Apple Watch.
Kusarudza pikicha pane yako Apple Watch
Shandisa iyo Dhijitari Korona kuswededza mukati nekubuda pane iyo foto app pane yako Apple Watch uye minwe yako kutenderera.
Kuisa imwe pikicha seyadhi yekutarisa paApple Watch yako, tsvaga pikicha muMifananidzo uye tora pane Apple Watch icon mukona yezasi kuruboshwe kuti uone kuti ndeapi mawadhi emeso aunogona kugadzira.
Apple Tarisa Masheya matipi uye manomano
Chinja iyo stock yekutarisa kumeso kuApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Masheya> Sarudza kana iwe uchida Mutengo Wazvino, Points Shanduko, Peresenti Shanduko, kana Musika Kapu.
Chinja default stock muKumhanya paApple Watch
Enda kune Chikamu cheMasheya eApple Tarisa app ye iPhone wobva wasarudza kubva kune akasiyana masheya akasiyana kana kungoita kuti ionese yako iPhone.
Apple Tarisa Mamiriro ekunze matipi uye manomano
Chinja iro rekutanga guta pane Apple Watch
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Mamiriro ekunze> Sarudza iro guta raunoda kuratidza pane ako maziso ekuona kana iyo Weather Glance.
Ona kutarisirwa kwemazuva gumi paApple Watch
Enda kune iyo Weather app pane yako Apple Watch uye swipe kumusoro kuti uone anotevera mazuva gumi emamiriro ekunze eguta iro.
Apple Tarisa Notifications matipi uye manomano
Zvinorevei izvo doti dzvuku paApple Watch?
Kana iwe ukaona rakatsvuka dot pane yako yekutarisa kumeso, zvinoreva kuti une unread notices. Kuti ubvise iyo dot, vhura iyo Watch app pane iPhone> Notifications> Bvisa Notifications Indicator.
Maitiro ekudzima ese Notices paApple Watch
Dhura kumusoro kweyezvinozivisa pane kuti ubvise zvese kuzivisa pane yako Apple Watch.
Maitiro ekuona zvakapfuura zviziviso paApple Watch
Svetera pasi kubva pamusoro pekona pane yako Apple Watch uye zvese zvako zvisina kuzivikanwa zviziviso zvichaonekwa.
Usaratidze meseji paApple Watch, chete yambiro
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Notifications> Sarudza Notification Privacy.
Zvino kana iwe wawana meseji iwe uchazoiziva yayo kubva kune yakasarudzika app asi iwe unofanirwa kutepa kuti uone zvarinotaura. Inobatsira kana usiri kuda kuti vamwe vaverenge zviyeuchidzo zvako.
Maitiro ekucheka pasi ziviso paApple Watch
Enda kuApple Watch app ye iPhone> Notifications> Sarudza kana iwe uchida Apple uye yechitatu bato maapplication kukutumira iwe ziviso kana kwete.